Qiimeynti Shirkii Burco Muxuu Kaga Duwanaa@ Shirarkii Salaadiinta Beesha Garxajiis Borame iyo Hargeysa Waddani Uga Dhex Ololeeyan
Wednesday October 11, 2017 - 14:34:18 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Anigu Mabda' iyo siyaasad ahaanilama qurux badnaa inay gebi ahaan madaxdhaqameedka Salaadiinta Somaliland ay, sii qawaan oo beelaysan
Anigu Mabda' iyo siyaasad ahaanilama qurux badnaa inay gebi ahaan madaxdhaqameedka Salaadiinta Somaliland ay, sii qawaan oo beelaysan warbaahiinta uga sheegaan Xisbigga ay taageero siinayaan ama codkooda.
Beeshu doono hakasoo jeedan.
Waxaan la yaabay Xisbiga Waddani oo shirarkiisa dhawaaqiisa ololahiisa ay hormuud ka yihiin salaadiinta Beesha Garxajiis ugu facaweyn aan qarsan wareerarka aflagaadada dab hurinta Beelaha kale walaalahood HJ iyo Suber Awal oo ay isaga khaldantay Kulmiye Suber Awal Iyo HJ oo ah taageerayaasha laddhabarka baaxadda taageerayaasha Kulmiye dabcan.
Ceebna ma ahaa in beelahu Xisbi ku taageeran mabda wax qabad hoggan togan.
Laakiin loo arko laga uriyo xumaan colaad kalelagga saso wa shakii waa kalsooni xumo ka dhan ah beelaha Gobta ah ee xadaaradda dhaqaalaha iyo siyaasaddahormuudka deris wanaaga mideynta qaranka Somaliland.
Gud: Cali Dheeg
Ucid Party Wales/UK